XOG : Madaxda Dalka oo isku Khilaafsan Mowqofka laga qaadanayo Imaaraadka | Nabadqaad
XOG : Madaxda Dalka oo isku Khilaafsan Mowqofka laga qaadanayo Imaaraadka
Mar 10, 2018 - Aragtiyood
Xog gaara oo ay heshay nabadqaad.com ayaa sheegeysa in Madaxda Dalka isku khilaafsan yihiin go’aanka laga qaadanayo Dowlada Imaaraadka.
Guddoomiyeyaasha Golaha shacabka iyo Aqalka sare ayaa qaba aragti ah in Dowlada Imaaraadka ay kusoo xad gudubtay Madax banaanida iyo dowladnimada Soomaaliya, isla markaana ay qasab tahay in Mowqif adag laga qaato ama ay raali galin ka bixiso Heshiiska sedex geesoodka ee DP World, Itoobiya iyo Somaliland ay galeen.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ka mid ah Madaxda sida weyn kaga carootay Talaabada shirkada DP World iyo Hadalkii uu jeediyay Agaasimaha shirkadaasi oo Somaliland ku tilmaamay Dal Madax banaan.
Dhinaca kale Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa qaba in waqti la siiyo Dowlada Imaaraadka si ay u kala cadeyso in Soomaaliya ay taageeri siineyso ama inay dooneyso in ay carqaladeyso hanaanka dowladnimo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya hadii Imaaraadka uu ku adkeysto heshiiska DP World in Baarlamaanka Soomaaliya ay go’aan ka gaaraan laakiin in la siiyo waqti ku filan oo ay ku saxaan qaladaadka ka dhacay.